खाेकीकाे चार उत्तम घरेलु अाैषधी (विधिसहित) – Himalaya TV
२७ कार्तिक २०७५, मंगलवार १९:०८ भक्तपुरमा पनि हर्षोउल्लासका साथ छठ पर्व मनाइँदै
२७ कार्तिक २०७५, मंगलवार १८:४२ पुस मसान्तसम्म तीनवटै तहमा कर्मचारी समायोजन हुन्छ: मन्त्री पण्डित
२७ कार्तिक २०७५, मंगलवार १८:३७ पूर्व क्रिकेटर जोन्टी रोड्सद्वारा नेपाली क्रिकेट प्रशिक्षकलाई प्रशिक्षण
२७ कार्तिक २०७५, मंगलवार १८:३३ आठौं पुष्पलाल स्मृति राष्ट्रिय खुल्ला ब्याडमिन्टन च्याम्पियनसिपमा श्रेष्ठ र कटुवालको विजयी सुरुवात
२७ कार्तिक २०७५, मंगलवार १८:२५ माओवादी धारका पार्टीहरूको आपसी एकतामा जोड
२७ कार्तिक २०७५, मंगलवार १७:४२ इजरायलद्वारा गाजा क्षेत्रमा हवाइ अाक्रमण
Home » समाचार » खाेकीकाे चार उत्तम घरेलु अाैषधी (विधिसहित)
खाेकीकाे चार उत्तम घरेलु अाैषधी (विधिसहित)
१९ मंसिर २०७४, मंगलवार १७:४४
खाेकी लागेमा डाक्टरकाेमा गर्इ कफ सिरप वा यस्तै अाैषधी लिनुभन्दा बाहेक प्रशस्त अाराम गर्ने,पानी वा झाेलिलाे कुरा पिउने एवं केही प्राकृतिक अाैषधी पनि सेवन गर्दा राम्राे हुन्छ ।
संसारका कराेडाैं मानिसहरूले व्यवहारिक रुपमै प्रयाेग गरेर सिद्ध भैसकेकाे खाेकी निकाे पार्ने यी घरेलु अाेखतीबारे हामी यहाँ चर्चा गर्दैछाैं
:१. प्याजकाे रस
प्याजकाे रस रुघा, खाेकी तथा अन्य स्वास-प्रस्वास सम्बन्धी समस्याकाे लागि एकदम लाभदायक हुन्छ । यसमा पाइने सल्फर तत्वले शक्तिशाली एंटीब्याक्टेरियाकाे काम गर्दछ जसले गर्दा खाेकी उत्पन्न गराउने ब्याक्टेरियालार्इ सजिलै मार्दछ ।
विधि: प्याजलार्इ केलाएर चार टुक्रामा काट्नुहाेस् । एउटा भाँडाेमा प्याजका टुक्राहरू र दुर्इ कप पानी राखेर उमाल्नुहाेस् । उम्लिन शुरु भएपछि १५ मिनेट जति थाेरै हिटमा तताउनुहाेस् र सेलाउन दिनुहाेस् । प्याजका टुक्राहरू फ्याँकेर त्यसकाे झाेल (सिरप) दिनभरि पिउनुहाेस् । स्वादका लागि कागतीकाे रस, मह वा स्याउ पनि मिसाएर खान सकिन्छ ।
२. नुन पानी
अध्ययनकाे अनुसार नुन पानीले कुल्ला गर्नाले स्वासनलीकाे माथिल्लाे भागमा भएकाे इंफेक्सन एवं छाती दुखेकाे पनि कम गराउँछ । गला सुन्निदा उत्पादन हुने अनावश्यक रसलार्इ निष्काशन गर्न पनि नुनले मद्दत गर्दछ । सिंगान र खकारकाे मात्रालार्इ स्वाट्टै घटाउनुका साथै घाँटीका अरु धेरै समस्यालार्इ निराकरण गर्न पनि यसले सहयाेग गर्दछ ।
विधि: एक गिलास ताताे पानीमा अाधा चम्चा नुन राखी राम्राेसँग घाेल्नुहाेस् । उक्त नुन पानीले दिनकाे तीनपटक केही सेकेन्ड गलामा कुल्ला गरी थुक्नुहाेस् ।
बेसारमा एंटिब्याक्टेरियल तत्व पाइने कारण विभिन्न खाले खाेकी निकाे पार्न उपयाेगी साबित हुन्छ । बेसार पानीले कुल्ला गर्दा पनि फाइदा हुन्छ ।
विधि: अाधा चम्चा नुन र अाधा चम्चा बेसार ताताे पानीमा राखी कुल्ला गर्नुहाेस् । छिट्टै सुधार भएकाे महसूस गर्न सक्नुहुनेछ । त्यस्तै, १ चम्चा बेसार, अाधा चम्चा दालचिनीकाे पाउडर, १ चम्चा मह र एक चिम्टी कालाे मरिचकाे धुलाे एक गिलास ताताे दुधमा मिलाएर राती सुत्नुअघि पिउनुहाेस् । यदि सुख्खा खाेकी छ भने अलिकति बेसार एक चम्चा महमा मिसाएर दिनकाे ३/४ पटक सेवन गर्दा उत्तम हुन्छ ।
खाेकी र टन्सीलकाे समस्यालार्इ अदुवा धेरै प्रभावकारी हुन्छ । यसमा पाइने एंटीअक्सिडेन्ट, अत्यावश्यक तेल एवं अाेलियाेरेसिन तत्वका कारण अदुवाले खाेकी कम गराउन वा दबाउन सहयाेग गर्दछ ।
विधि: अदुवाकाे टुक्रा र एक गिलास पानी एउटा भाँडाेमा राखी तताउनुहाेस् । शुरुकाे पानीकाे अाधा जति नहुन्जेल उमालिरहनुस् । त्यसपछि खन्याएर एक चम्चा मह मिसार्इ तातै पिउनुभयाे भने खाेकीलार्इ घटाउन मद्दत मिल्छ ।
भक्तपुरमा पनि हर्षोउल्लासका साथ छठ पर्व मनाइँदै
२७ कार्तिक २०७५, मंगलवार १९:०८
पुस मसान्तसम्म तीनवटै तहमा कर्मचारी समायोजन हुन्छ: मन्त्री पण्डित
२७ कार्तिक २०७५, मंगलवार १८:४२
पूर्व क्रिकेटर जोन्टी रोड्सद्वारा नेपाली क्रिकेट प्रशिक्षकलाई प्रशिक्षण
२७ कार्तिक २०७५, मंगलवार १८:३७
आठौं पुष्पलाल स्मृति राष्ट्रिय खुल्ला ब्याडमिन्टन च्याम्पियनसिपमा श्रेष्ठ र कटुवालको विजयी सुरुवात
२७ कार्तिक २०७५, मंगलवार १८:३३
माओवादी धारका पार्टीहरूको आपसी एकतामा जोड
२७ कार्तिक २०७५, मंगलवार १८:२५